HUAWEI FullView Display နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Ultralight အမျိုးအစား HUAWEI Matebook D အမျိုးအစားသစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်မကြာမီဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မည်
Huawei Consumer Business Group (CBG) မှ Ultralight အမျိုးအစား Laptop အသစ်ဖြစ်သည့် Huawei Matebook D 14 ကိုမကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင်ရောင်းချတော့မည် ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။ လူငယ်အသုံးပြုသူများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီး Laptop အမျိုးအစားသစ်သည် ၁၄ လက်မ အရွယ်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခ�
1 month ago Laptop • News
Apple က နောက်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ Mac အားလုံးကို ကိုယ်ပိုင် ARM chip ပြောင်းလဲမယ်
ကျွန်တော်ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲ Apple က Intel base Mac တွေကို သူတို့ရဲ့ ARM processor နဲ့အစားထိုးပြီးထုတ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ARM processor နဲ့သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် app တွေလုပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက် လုံးဝပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာ အချိန်နှစ်နှစ်တော့ကြာမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ ဒီတေ
Upgrade ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ 13လက်မ Macbook Pro
မနှစ်က Apple ရဲ့ 16 လက်မ Macbook Pro အသစ်ကိုတွေ့ရတော့ ဒီနှစ်မှာ 13လက်မ Macbook Pro ကို 14လက်မ upgrade ပြုလုပ်လောက်မယ်လို့ထင်ထားတာ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ရှိပြီးထား 13လက်မ Macbook Pro ကိုပဲ အနည်းငယ် upgrade ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိက upgrade ကတော့ လက်ရှိ Macbook Air နှင့် 16 လက်မ Macbook Pro မှာတွေ့ရတဲ့ Magic Keyboard ပါပဲ။ ဒီ Apple �
3 months ago Laptop • News
ကျောင်းသုံးရုံးသုံးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ultrabook
2019 မှာ AMD Ryzen3(သို့) Ryzen5ပါလာပြီး SSD ပါတဲ့ ultrabook တွေတော်တော်လေးဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ AMD Ryzen3(သို့) Ryzen5ရဲ့ onboard graphic က intel UHD ပါတဲ့စက်တွေထက် graphic ပိုင်းပိုကောင်းလို့ budget PC တွေမှာလဲအသုံးများလာတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ Microsoft ရဲ့ 15 လက်မ Surface laptop3ဆိုရင်လဲ graphic ကောင်းကောင်းသုံးဖို့လိုတဲ့သူတွေအတွက်
4 months ago Laptop • News
Ultrabook ပေမဲ့ creator တွေအတွက်အဆင်ပြေစေမဲ့ Macbook Air 2020
မတ်လ 18 ရက်နေ့ ညနေလောက်မှာ Apple က Macbook Air အသစ်ကို သူတို့ website မှာ update လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီ MacBook Air 2020 ကတော့ စစထွက်ချင်းနဲ့မတူတော့ဘူး။ Base model က $999 ကစတဲ့အတွက် ဈေးသက်သာတဲ့ Macbook လိုချင်သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့(ဈေးသက်သာတဲ့ laptop လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်)။ အရင် 2018 model နဲ့ယှဉ်ကြည့်မ
Apple က iOS မှာ app ဝယ်လိုက်တာနဲ့ macOS မှာပါသုံးလို့ရတဲ့ universal purchases ပြုလုပ်
Apple မှာ iOS အသုံးပြုတာဆိုလို့ iPhone နဲ့ iPad နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Apple app store က app အကုန် iPhone အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ app တွေက iPad သီးသန့်ဟာတွေလဲရှိပါတယ်။ iPad မှာအားသာသွားတာက iPhone သီးသန့် app တွေလဲ iPad မှာ သုံးလို့ရတယ်။ တချို့ app တွေကတော့ iPhone ရော iPad ရောနှစ်မျိုးလုံးမှာသုံးလို့ရပြီး
6 months ago Laptop • News
PC ဆင်ရတာပိုလွယ်လာတော့မယ့် Razer Tamahawk modular PC
CES 2014 တုန်းက Razer က Project Christine ဆိုပြီး modular PC prototype ကိုပြသခဲ့တယ်။ Modular PC ဆိုတာ base တစ်ခုပေါ်မှာမှ ဘာကြိုးတွေချိတ်စရာမလိုတဲ့ PC ကိုပြောတာပါ(ပါဝါကြိုးတော့လိုတယ်နော်)။ CPU လဲတယ်ဆိုပါတော့ ပန်ကာဖြုတ်လိုက် slot ဖွင့်ပြီး chip ထည့် ပန်ကာပြန်တပ်ပြီး ကြိုးတွေပြန်ချိတ်တာ အဲ့လိုမျိုးတွေရှုပ
7 months ago Laptop • News
Foldable နဲ့ dual screen ပါတဲ့ Dell's Concept Ori နှင့် Concept Duet Laptop နှစ်မျိုးကို Dell ကမိတ်ဆက်
photo: The Verge2019 မှာ foldable ဖုန်းတွေတင်မကဘူး Lenovo ရဲ့ fodable laptop prototype ကိုပါ CES မှာစတင်တွေ့ခဲ့ရပြီး 2019 အောက်တိုဘာလလောက်မှာ Microsoft Surface Neo နှင့် Duo ဆိုတဲ့ Surface Laptop နှင့် ဖုန်းကိုလဲတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Dell က သူ့ရဲ့ dual screen ရယ် foldable ရတဲ့ laptop နှစ်မျိုးရဲ့ prototype ဖြစ်တဲ့ Concept Ori နှင့် Concept Duet ဆိုတဲ့ laptop
အသစ်ထွက်တဲ့ Macbook Pro 16 လက်မက $2,400 တန်ရဲ့လား?
Laptop တွေက PC တွေထက် ဈေးပိုကြီးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gaming PC လို high performance ပစ္စည်းတွေကို laptop လိုကိုယ်ထဘ်သေးသေးလေးမှာထည့်ပေးရတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးသတိထားမိကြမှာက Apple ရဲ့ Macbook က Gaming PC တွေလောက် performance မရှိပဲ ဘာလို့ဈေးကြီးရတာလဲပေါ့။ ဒီလောက်ဈေ
8 months ago Laptop • News
Apple က အသစ်ကြေညာလိုက်တဲ့ 16 လက်မ Macbook Pro
ခါတိုင်းတွေလိုပဲ ဘာ keynote တွေမှ မလုပ်ပဲ တိတ်တဆိတ်နဲ့ Apple Store ကိုပြင်လိုက်ပြီး 16 လက်မ Macbook Pro ကို Apple ကကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဒီ 16 လက်မကို 15 လက်မ Macbook Pro အစားထိုးမယ်တော့ကြားခဲ့ပေမယ့် 15 လက်မ Macbook Pro ကိုမေလကမှ upgrade ပြန်လုပ်လို့ ဒီ 16 လက်မကို သက်သက် series အနေနဲ့ထွက်မယ်လို့ admin ကထင်နေတာ။ တကယ်�
Apple ရဲ့16 လက်မ Macbook Pro ကိုဒီအပတ်တွေ့ရတော့မယ်
ကျွန်တော်တို့ မတ်လတုန်းကကြားတဲ့သတင်းတွေအရ ဒီနှစ်မှာ AirPods Pro ရယ် MacBook Pro 16 လက်မရယ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာ လောလောဆယ် AirPods Pro တော့တွေ့ရပြီ။ ဒီ 16 လက်မ Macbook Pro ကတော့ လက်ရှိ 15 လက်မ Macbook Pro ထက် display မှာဘေးဘောင်တွေပိုသေးပြီး Intel 9th Gen Core i9 နဲ့လာမယ်လိုတော့ကြားတယ်။ ပြီးတော့ ပြဿနာဖြစ်တဲ့ butterfly keyb
Apple Macbook Air ထက် 3x ပိုမြန်တယ်လို့ပြောတဲ့ Microsoft Surface Laptop 3
ဒီနှစ်မှာ Microsoft က Surface Laptop3ကို 13 လက်မရယ် 15 လက်မရယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဒ်နှစ်မျိုးနဲ့ထုတ်လာတယ်။ Design ကတော့ အရင် Surface Laptop တွေလို Alcantara keyboard တော့မရတော့ဘူး။ အခြား laptop တွေလိုပဲ fully aluminium body design နဲ့ပဲလာတော့တယ်(Base model တော့ fabric keyboard ရဦးမယ်)။ ပြီးတော့ မနှစ်ကမပါတဲ့ USB-C ပါလာပေမယ့် charging ကတော့ Surface connector နဲ�
10 months ago Laptop • News
ခေါက်လို့ရတဲ့ Microsoft Surface Neo နှင့် Surface Duo
Microsoft ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် hardware product ဖြစ်တဲ့ Surface series ကို မနေ့ညက product အသစ်တွေကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ Surface Pro တို့ Surface Laptop တို့တွေပါတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Microsoft Surface Neo ရယ် Surface Duo ဆိုတဲ့ ခေါက်လို့ရတဲ့ tablet နှစ်ခုပေါ့။ ဒီနှစ်မှာခေါက်လို့တဲ့ Samsung Galax
PC နှင့် Laptop ဘယ်ဟာဝယ်သင့်သလဲ?
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် လူတိုင်းအများဆုံးစဉ်းစားကြတာက PC ဝယ်ရမှာလား Laptop ဝယ်ရမလားပါပဲ။ နောက်ပိုင်း Branded PC တွေက specs တွေလဲကောင်းလာပြီး ဈေးလဲသက်သာလာပေမယ့်လဲ လူတော်တော်များများ laptop ဝယ်နေကြတုန်းပဲ။ Laptop အဓိကဝယ်ကြတဲ့အကြောင်းကတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောနေစရာ
Razer ရဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး gaming ultrabook
Razer Blade Stealth ဆိုတဲ့ ultrabook ဟာဆိုရင် 2016 လောက်ကစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခံလိုက်ရတဲ့ ultrabook ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာ USB-C ပါလာပြီး Razer Core တို့လို USB-C external graphic တွေကို ultrabook နဲ့ချိတ်ပြီး gaming အနေနဲ့ဆော့ဆော့ အခြား graphic card လိုအပ်တဲ့ software ပဲသုံးသုံး အဆင်ပြေတဲ့ ultrabook ပါပဲ။ ရ�
Samsung Dex တို့ iPadOS တို့က PC ကိုအစားထိုးနိုင်တော့မှာလား?
နည်းပညာတွေက တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူ ကွန်ပျူတာတွေလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးလာတယ် ပါးလာတယ်။ ဒါတင်မကပါဘူး မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကလဲ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနီးနီးသုံးလို့ရလာတော့ နောက်ဆိုကွန်ပျူတာတွေနေရာ စတ်ဖုန်းတွေအသားထိုးလာဖို့များလာပါပြီ။ Samsung ရဲ့ Dex